နတ္တလင်း ဒေသခံများ ရွှေလွင်လွင် ကုမ္ပဏီကို ဆန္ဒပြ
The Voice Weekly · 167,987 like this
July 8 at 12:53pm near Yangon ·
နတ္တလင်း၊ ဇူလိုင် ၆
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နတ္တလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မှန်တန်းရွာမှ ဒမငယ်ရွာသို့ အရှည် ခုနစ်မိုင်ခန့် ကျောက်ခင်းလမ်း ဖောက်လုပ်နေသော ရွှေလွင်လွင် ကုမ္ပဏီကို သတ်မှတ် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ယင်းဒေသရှိ ရွာသူ ရွာသားများမှ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့က ဒုတိယအကြိမ် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နတ္တလင်းမြို့နယ် မှန်တန်းရွာမှ ဒမငယ်ရွာသို့ အကျယ် ၁၂ပေ၊ အရှည် ခုနစ်မိုင်ခန့်ရှိသော ကျောက်ခင်းလမ်းကို စည်ပင်မှ တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ရွှေလွင်လွင် ကုမ္ပဏီကို ဧပြီလအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဟု ဆိုထားသော်လည်း သတ်မှတ်ချိန် ကာလအတွင်း ပြီးစီးခြင်းမရှိသောကြောင့် ဒေသခံများမှ ဇွန်လ ၂၅ရက်နေ့ တွင် ပထမအကြိမ် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခဲ့ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်း ပေါက်တုန်းကျေးရွာနေ ကိုဝင်းဇော်က The Voice သို့ ပြောကြား သည်။
အဆိုပါလမ်းသည် ကျေးရွာပေါင်း ၃၀ကျော်ရှိ ရွာသူ ရွာသားများ နေ့စဉ် အသုံးပြု သွားလာလျက်ရှိပြီး ယခုအခါ ကုမ္ပဏီက လမ်းပြင်ရန် ကျောက်တုံး များ ချထားကြောင်း မိုးကာလ ဖြစ်သည့်အတွက် လမ်းအခြေအနေ ဆိုးဝါးမှု များကြောင့် လယ်ယာ ထွက်ကုန်များ မြို့သို့ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရသည့် စရိတ်များ မြင့်တက်သွားကြောင်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ သွားလာရန် အခက်အခဲ ရှိနေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
“ကုမ္ပဏီက ဧပြီလ ပြီးအောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်ထိ မပြီးသေးဘူး ပဲခူးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် လာသွားတုန်းက ဇွန်လမှာ ပြီးအောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ မပြီးပြန်ဘူး၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆီမှာ ဒီလကုန် ပြီးအောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ထပ်မံ ကတိပေးထားတာ ကြားမိတယ်။ လမ်းက သွားရေး လာရေး ခက်ခဲနေတော့ ကယ်ရီခတွေ လေးဆလောက် တက်သွား တယ် အရင်က စပါး တစ်တင်း ဆိုရင် သယ်ယူခ ကျပ် ၁၅၀ လောက်ဘဲရှိတာ အခု ၆၀၀၊ ၇၀၀ လောက် ပေးနေရတယ်” ဟု ကြို့ပင်သာ ကျေးရွာမှ ဦးဝင်းကြည် က ပြောသည်။
ရွှေလွင်လွင် ကုမ္ပဏီအား အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင် နှောင့်နှေးရခြင်းမှာ မိုးတွင်းကာလ ဖြစ်နေခြင်း၊ တောင်ညိုဘက်မှ ဆင်းလာသည့် သစ်လုံးတင်ကား များ ပြေးဆွဲနေခြင်းနှင့် နေ့စား အလုပ်သမား လိုအပ်ချက် များကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု လကုန်အတွင်း စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်များ အဆင်ပြေသွားလာနိုင်သည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်း ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်တင်တင်နုက The Voice သို့ ပြောသည်။
ဆော့ဝဲမလိုပဲ ဒေါင်းလုလုပ်နည်း ...
Myanmar Online Learning shared Maung Pauk's photo.
ဘာ Software မှ မသုံးဘဲ Video နှင့် Music တွေကို Doanload လုပ်နည်း
ဘာ Software မှ မသုံးဘဲ Video နှင့် Music တွေကို Doanload လုပ်နည်း **************************************************** ဘာ Software မှ မသုံးဘဲ Video နှင့် Music တွေကို Doanload လုပ်နည်းကို သိပြီးသားမိတ်ဆွေများလည်းရှိမှာပါ. ခု မျှဝေတာက မသိသေးသူတွေအတွက်ပါ.. ဘာ Software မှ မလိုပါဘူး.. တစ်ခုတော့ရှိတယ်.. Browser ကတော့ Mozilla Firefox ကိုသုံးရမှာပါခင်ဗျ.. လုပ်နည်း ******* 1. Mozilla Firefox ရဲ Menu Bar ပေါ်က Tools အောက်မှာ Add-ons ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ.. ( Shortcut = Control + Shift +A) 2. ကျလာတဲ့ New Tab မှာ ဘယ်ဘက်က Get Add-ons ကိုရွေးလိုက်ပါ.. ညာဘက်အပေါ်နားလေးက Search Box လေးထဲမှာ Download Video Helper ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ.. ပုံမှာ ပြထားသလို Video DownloadHelper နဲ့ အခြား Downloader Add-ons တွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. 3. ပထမဆုံး Video DownloadHelper ရဲ့ဘေးက Install ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် အထက်မှာပြထားသလို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Downloader Add-ons တွေကို ၂ ခု ၃ ခုလောက် Install လုပ်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် Firefox ကို ပိတ်လိုက်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ.. Restart လုပ်တာပေါ့ဗျာ.. ဒါဆိုရင်တော့ IDM လို Software မသုံးဘဲနဲ့ Video နဲ့ သီချင်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဒေါင်းနိုင်ပြီးပေါ့ဗျာ.. အဆင်ပြေပါစေ.. မောင်ပေါက် <www.maungpauk.org>
ဘာ Software မှ မသုံးဘဲ Video နှင့် Music တွေကို Doanload လုပ်နည်းကို သိပြီးသားမိတ်ဆွေများလည်းရှိမှာပါ. ခု မျှဝေတာက မသိသေးသူတွေအတွက်ပါ.. ဘာ Software မှ မလိုပါဘူး.. တစ်ခုတော့ရှိတယ်.. Browser ကတော့ Mozilla Firefox ကိုသုံးရမှာပါခင်ဗျ..
1. Mozilla Firefox ရဲ Menu Bar ပေါ်က Tools အောက်မှာ Add-ons ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ.. ( Shortcut = Control + Shift +A)
2. ကျလာတဲ့ New Tab မှာ ဘယ်ဘက်က Get Add-ons ကိုရွေးလိုက်ပါ.. ညာဘက်အပေါ်နားလေးက Search Box လေးထဲမှာ Download Video Helper ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ.. ပုံမှာ ပြထားသလို Video DownloadHelper နဲ့ အခြား Downloader Add-ons တွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
3. ပထမဆုံး Video DownloadHelper ရဲ့ဘေးက Install ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် အထက်မှာပြထားသလို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Downloader Add-ons တွေကို ၂ ခု ၃ ခုလောက် Install လုပ်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် Firefox ကို ပိတ်လိုက်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ.. Restart လုပ်တာပေါ့ဗျာ.. ဒါဆိုရင်တော့ IDM လို Software မသုံးဘဲနဲ့ Video နဲ့ သီချင်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဒေါင်းနိုင်ပြီးပေါ့ဗျာ..
ချိန်ပုံချိန်နည်းမှာ ဖုန်းတိုင်း မတူနိူင်ပါ။ အရင်ဆုံး ချိန်မည် ဆိုပါက Data Switch ကို ဖွင့်ပေးထားပြီး Name,APN နှစ်မျိုးသာထည့်၍ Save လုပ်ပါ။
အများစုမှာ ၄င်းအတိုင်းတွင် လိုင်းတက်ပါသည်။ မတက်လျှင် Authentication type ကို ထည့်ပေးရပါမည်။
အများစုမှာ PAP or CHAP နှင့် တက်ပါသည်။ samsaung >2.3.6 အများစုတွင်တော့ CHAP ကိုသာ လက်ခံပါသည်။
မတက်လာသေးလျှင် username ထည့်ကြည့်ပါ။
ထိုမှ မတက်လာသေးလျှင်တော့ password ကို ထည့်ကြည့်ရပါမယ်။
ဒါပါပဲ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ။
GSM Internet Setting ချိန်နည်း။
ဖုန်းတိုင်း မတူညီ၍ တသတ်မှတ်တည်းတော့ သတ်မှတ်၍ မရပါဘူး။
Name _ နှစ်သက်ရာ ထည့်နိူင်ပါသည်။
APN _ mptnet
Proxy _ မလိုပါဘူး။
Port _ မလိုပါ။
Username_ မလိုပါ။ (တစ်ခါတစ်ရံတော့ လိုအပ်ပါသည်။ mptnet ပဲ ထည့်ပေးပါ)
password _ မလိုပါ။ ( တစ်ခါတစ်ရံတော့ လိုအပ်ပါသည်။ 123 or 12345 ထည့်ပေးပါ)
ှServer _ မလိုပါ။
MMSC _ မလိုပါ။
MMS proxy_ မလိုပါ။
MMS port _ မလိုပါ။
MCC _ 414 ( ထည့်ပေးစရာမလိုပါ။ APN ကို mptnet ထည့်တာနှင့် အလိုအလျောက် တက်ပါမည်)
MNC _ 01 ( သူလည်း APN ထည့်တာနှင့် အလိုအလျောက်တက်ပါသည်)
Authentication type _ (PAP or CHAP) or ( CHAP)
APN type_ပုံမှန်အားဖြင့် ထည့်စရာမလိုပါ။ ( Samsung များတွင် internet +mms ကို ရွေးပေးရပါမည်။)
CDMA 800 Internet setting ချိန်နည်း။
အလုံးတိုင်းတော့ မတူနိူင်ပါဘူးနော်။ ကိုယ်ဥာဏ်ရှိသလို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ကြည့်ပါ။
Name _နှစ်သက်ရာ ထည့်နိူင်သည်။
Port _မလိုပါ။(တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့ 80 ကို ထည့်ပေးပါ)
Password _ပုံမှန်အားဖြင့် မလိုပါ။( 123 or 12345)
MCC_default အနေဖြင့် တက်ပါသည်။
MNC_default အနေဖြင့် တက်ပါသည်။
Authentication type_PAP or CHAP (or) CHAP
APN type_ပုံမှန်ဆို ထည့်စရာမလိုပါ။ (လိုခဲ့သော် default ဟုသာ ထည့်ပေးပါ)
Prompt password_ #777
ယခု ထွက်ရှိသော 1500 တန် CDMA 800 ဖုန်းများအတွက် Internet Setting ချိန်နည်းလေးပါ။
Name _ Mectel (or) Card
APN _ #777
Proxy _ မလိုပါ။
Username _ mectel@c800.mm (or) card@c800.mm
password _ 123 (or) 12345 (or) card
APN type_ပုံမှန်အားဖြင့် မလိုပါဘူး။ ( default ကိုသာ ထည့်ပေးပါမယ်။)
Data bearer_ မလိုပါ။
APN မပါသော သူများကတော့ PPP Digit မှာ #777 ထည့်ပါမယ်။
Connection name တောင်းခဲ့ရင် mectel ပါနော်။